N'ihi na Google kwuru otú | Martech Zone
N'ihi na Google kwuru Ya mere
Wednesday, February 27, 2013 Wednesday, February 27, 2013 Douglas Karr
Google bu onye-isi. Oge. Anyị enweghị ike izere ya. Ọ bụrụ n’ịchọrọ irite uru na nchọta ihe, usoro SEO dị mfe - gee ntị n’ihe Google chọrọ ka ị mee wee mee ya! (Na emela ka ha si eme)
Ọ mere ọzọ n'izu a. Onye nnochite anya nke ngalaba web wepụrụ ọkwa na Webmasters na mmụba nke njehie dịka enweghị isi. Dịka onye ndụmọdụ ha, a gwara m ka m gbachitere, n'ọnụ ọgụgụ, ihe kpatara ha ji edozi nsogbu ndị ahụ. N'ịghọta na mmepe ahụ metụtara kpụ ọkụ n'ọnụ ma enwere nnukwu ego iji dozie esemokwu ahụ, lee nzaghachi m:
N'ihi na Google kwuru otú ahụ.
Gịnị kpatara mkparịta ụka ahụ ga-eji gaa n'ihu karịa nke ahụ? Ọ dị m ka ya bụrụ na m matara algorithm kachasị ọhụrụ ma nwee ike iji magi gbakọọ mgbanwe dị na saịtị ahụ, asọmpi ahụ, ewu ewu nke ọdịnaya ahụ wee jiri ngụkọta ngụkọta wee nye nyocha elele ego. Amaghị m algọridim. Enweghị m ike inye akaebe ahụ. Ihe m nwere ike ịgwa gị bụ:
A na-akpọ ya njikarịcha. Ihe kachasị mma bụ usoro na-aga n'ihu na-aga eleba anya na ozi niile Google nyere, nyochaa saịtị gị na ụkpụrụ ha, ma nye gị nyocha na ndepụta kachasị mkpa iji dozie. Kwa ụbọchị, Google na-enyekwu nghọta banyere otu ha chọrọ ka ị chee ọdịnaya iji dọta ogo ogo ọchụchọ.
Anyị nwere ike ibute ụzọ dabere na ụfọdụ nchọta nke ndị isi SEO ndị ọzọ gafere web yana site na ahụmịhe nke ndị ahịa anyị. Mana n'ime ndepụta ahụ, enweghị m ike ịgwa gị ihe mmetụta nke onwe nke mgbanwe ndị a ga-eme n'ogo ogo gị. Ọ bụrụ na ị nwere onye na-agwa gị na ha maara… ha na-agha ụgha.
Otu ihe atụ na-adịbeghị anya bụ mgbasa ozi ọdịnaya. Izu a, Google chetara onye obula na ọ bụrụ na ị kwụghachi mmadụ ụgwọ maka ibipụta ọdịnaya gị - yana njikọ sochiri - ọ bụ mmebi nke usoro ọrụ ha.
Agaghị m arụrịta ụka na onye ahịa na usoro ha were maka ị nweta ọdịnaya ahụ… ma ọ bụ nuance nke ọ bụ gaa blogger outreach nke ahụ nwere njikọ na ya… mana akwụghị ya ụgwọ n'ezie maka njikọ ahụ, naanị ọdịnaya ahụ. Amaara m na ha na-arụ ọrụ nke ọma na ọkwa ahụ na-akpata ọtụtụ azụmaahịa. Ma m ka na-adụ ha ọdụ ka ha kwụsị.
Ọ bụrụ n ’ịgbanyeghị nke ọma, ma ị naghị emegharị ozi sitere na Google gbasara saịtị gị, njehie edepụtara na Webmasters, ma ọ bụ na ị na-akwụ ụgwọ maka ọdịnaya mgbasa ozi… ịkwụsị ya.
Tags: ọdịnaya mgbasa ozindị webmasters googlegoogle +njikarịchanyocha ọchụchọsearch engineA
Magento na osCommerce na OpenCart
Umengwụ Ibu Ibu Social bọtịnụ na Socialite.js
Feb 28, 2013 n’elekere 12:46 nke abali
Ezi blog isiokwu Doug! Kinda chetara m mmekọrịta dị na Nne na Nna. “Gaa hichaa ime ụlọ gị nke obere!” “N'ihi gịnị?” Ihe mere m ji gwa gị! Anọ m na mkparịta ụka mụ na onye ahịa na-eche na ha ga-enwe ike ịmalite weebụsaịtị ọhụrụ ha na ụtụtụ Mọnde na ụtụtụ Mọnde nke ụbọchị ahụ na-atụ anya Google ka kowtow na ọkwa ha. Akọwaara m ha na mgbe m jikọtara omume SEO kachasị mma na weebụsaịtị ha, ọ ka dịịrị onye pụrụ ime ihe niile Google ịzaghachi. Google echeghi na anyi, anyi na echere na Google. Onye ahia m enwetaghị ya. Ha choro ihe nile Google gha inye na nyocha mpaghara ugbu a! Mmetụta ahụ, "Ihe ọma na-abịakwute ndị ahụ na-echere" enweghị ihe ọ bụla metụtara obere onye ọchụnta ego nke chọrọ Akwụkwọ Mbụ nke Google.
Ugbu a nke ahụ bụ ụfọdụ ihe dị mma ebe ahụ! Nke ahụ choro ngalaba nke ya nke nwere ọdịnaya dị na ya. Know maara dịka "hapụ m Google ka ọ bụrụ maka gị". Amamiihe!